Etu ị ga-esi nyere Onye Kraịst tọrọ atọ mmehie
Onye isi pastọ, Graceka Grace Grace nke Indiana, Pennsylvania
Brothersmụnna m, ọ bụrụ na onye ọ bụla enwee mmebi iwu, unu ndị mmụọ nsọ kwesịrị iji mmụọ nke obi ọma weghachi. Kpachara onwe gị anya ka a ghara ịnwa gị ọnwụnwa. Ndị Galeshia 6: 1
Ndi akanam ẹmụm fi ke idiọkn̄kpọ? Okwu a sụgharịrị ịbụ "ejide" na Ndị Galetia 6: 1 pụtara "gafere". Ọ pụtara ịbụ nke anwụrụ. O riri anyị ọnụ. Mee ka ọnyà.
Ọbụghị naanị ndị na-ekweghị ekwe, mana ndị kwere ekwe nwere ike ime ka ha sụọ ngọngọ site na mmehie. Tọrọ atọ. Enweghi ike ịgbawa ngwa ngwa.
Olee ihe anyị kwesịrị ime?
Ikpanam n̄kpọ didie ye owo emi akwa idiọkn̄kpọ anamde? Ọ́ bụrụkwanụ na mmadụ abịakwute gị gwa gị na ihe ndị ahụ gbawara gị obi? Ha na-ewe iwe ma ọ bụ na-eribiga nri ókè. Olee ihe anyị kwesịrị ime banyere ha?
O di nwute, ndi kwere ekwe adighi emeghachi omume oma. Mgbe onye na-eto eto kwupụtara mmehie, ndị nne na nna na-ekwu ihe dịka, "Olee otu ị ga - esi mee nke ahụ?" ma ọ bụ "Gịnị ka ị nọ na-eche?" O di nwute, enwere oge mgbe umu m kwuputara m nmehie m ebe m gosiputara mmechuihu m site wedata isi m ma obu gosi ihe mgbu.
Okwu Chineke na-ekwu na ọ bụrụ na mmadụ adaba n'ANB wrongdoGH wrongdo ihe ọjọọ ọ bụla, anyị kwesịrị iji obiọma weghachi ya. Ọ B transgressLA mmejọ: Ndị kwere ekwe na-ada iwu mgbe ụfọdụ. Ndi kwenyere na ha di n ’ihe ojo. Mmehie na-eduhie eduhie ma ndị kwere ekwe na-adabakarị na aghụghọ ya. Ọ bụ ezie na ọ na-akụda mmụọ ma na-agbawa obi na mgbe ụfọdụ ọ na-awụ akpata oyi ma ọ bụrụ na onye kwere ekwe ibe anyị ekwupụta na ya emewo mmehie dị oké njọ, anyị kwesịrị ịkpachara anya n'otú anyị si emeghachi omume na ha.
Ihe mgbaru ọsọ anyị: iweghachi ha na Kraịst
Ihe mgbaru ọsọ mbụ anyị kwesịrị ịlaghachi ha na Kraist: "unu ndị mmụọ, ị kwesịrị iweghachi ya". Anyi kwesiri igosi ha mgbaghara na ebere nke Jisos Ichetara ha na O kwuru ugwo maka nmehie nile anyi n’elu obe. Iji mesie ha obi ike na Jisos bu onye isi nchu aja onye nwere uche ma na-eme ebere, onye na-echere n’ocheeze amara ya igosi ha obi ebere ma nyere ha aka n’oge nsogbu ha.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ha echegharịghị, ebumnuche anyị kwesịrị ịbụ ịzọpụta ha ma mee ka ha laghachikwute Kraịst. Ntụzi aka ụka nke a kọwara na Matiu 18 abụghị ntaramahụhụ kama ọ bụ ọrụ nnapụta nke na-achọ ịlaghachi atụrụ furu efu n'aka Onyenwe anyị.
Obiọma, ọ bụghị iwe
Ma ka anyị na-anwa iweghachite mmadụ, anyị kwesịrị ime ya "na mmụọ nke obi ọma", ọ bụghị iwe - "Enweghị m ike ikwenye na ị mere ya ọzọ!" Enweghị ebe iwe ma ọ bụ ịkpọasị. Mmehie nwere nsonazụ na-egbu mgbu na ndị mmehie na-atakarị ahụhụ. A ghaghị iji obiọma mesoo ndị merụrụ ahụ.
Nke ahụ apụtaghị na anyị enweghị ike ịme mgbazi, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha egeghị ntị ma ọ bụ chegharịa. Ma, anyị kwesịrị ịna-emeso ndị ọzọ ihe otú anyị chọrọ ka a na-emeso anyị.
Otu n'ime ihe kachasị kpatara obi ebere bụ "ilezi onwe gị anya, ka a ghara ịnwa gị ọnwụnwa." Anyị ekwesịghị ikpe onye jidere mmehie, n'ihi na oge ọzọ ọ nwere ike ịbụ anyị. Enwere ike ịnwa anyị ma daba n'otu mmehie, maọbụ banye na nke ọzọ, ma hụ na anyị ga-eweghachi. Echela, "Olee otu onye a ga-esi mee nke a?" ma ọ bụ "Agaghị m eme nke ahụ!" Ọ ga-aka mma iche: “Mụ onwe m bụkwa onye mmehie. Enwere m ike ịda. Oge ọzọ ọrụ anyị nwere ike gbanwee “.
Emebeghị m ihe ndị a nke ọma. Adịbeghị m mma mgbe niile. M dị mpako n’obi m. Mana achọrọ m ịdị ka Jizọs nke na-echeghị ka anyị na-emekọ ihe ọnụ tupu ọ nweere anyị ọmịiko. Achọrọ m ịtụ egwu Chineke, ebe m ma na ọnwụnwa na-ada ka onye ọ bụla.
Nke gara aga Post Gara aga post:Uru nke itinye mkpụrụ obi na Purgatory
Next Post → Post ozo:Ozioma nke taa dị ka Nọvemba 9, 2020 na okwu Pope Francis